Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Czechia » Ndị isi oche ọdụ ụgbọ elu Prague na -ahọpụta onye isi oche ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Kọmịshọna nke ụlọ ọrụ ahụ họpụtara Maazị Pos ka ọ bụrụ onye kachasị dabara adaba n'ime obi ebere akpọrọ maka ọkwa ahụ.
Jiri Pos hoputara onye isi oche ndị isi oche ọdụ ụgbọ elu Prague.
Kọmitii Nhọpụta Ndị Ọrụ nke Czech Republic kwadoro nhọpụta ya.
Mịnịsta na -ahụ maka ego nke Czech Republic tụrụ aro nhọpụta ya.
Taa, Jiří Pos hoputara onye isi oche nke ndị isi oche ọdụ ụgbọ elu Prague. N'ihi ya, ọ na -ewere ọrụ nke Onye isi oche nke ndị isi oche nke onye na -ahụ maka ọdụ ụgbọ elu mba ofesi na Czech Republic, na -arụ ọrụ 30 Ọgọst 2021.
Kọmitii Nhọpụta Ndị Ọrụ nke Gọọmentị Czech Republic kwadoro nhọpụta ya n'ime njikwa ụlọ ọrụ ahụ na Ọgọst 2021, na -eso ndụmọdụ nke Ministry of Finance nke Czech Republic, naanị onye nwe ụlọ ọrụ ahụ. Kọmịshọna nke ụlọ ọrụ ahụ họpụtara Maazị Pos ka ọ bụrụ onye kachasị dabara adaba n'ime obi ebere akpọrọ maka ọkwa ahụ.
Jiří Kraus gara n'ihu na -arụ ọrụ nke osote onye isi oche nke ndị isi oche.
Nke anọ dị ugbu a Ọdụ ụgbọ elu Prague Ndị isi oche nzukọ zutere taa na nzukọ pụrụ iche nke ndị otu iwu kwadoro ịtụ vootu onye isi oche ha. A kwadoro Jiří Pos. “Anaghị m ekwe nkwa ihe agaghị ekwe omume n'ime ụbọchị atọ na ọrụ ebube n'otu oge. Agbanyeghị, ekwenyesiri m ike na anyị nwere ike iji ikike ọdụ ụgbọ elu Prague mee ka ọ dị mfe ịlaghachi na uru ma kwalite mmepe ya na afọ ojuju nke ndị njem, ndị mmekọ azụmahịa anyị na onye nwe ya, ebe ọ na -adịkarị, na -atụle mmetụta na gburugburu ebe obibi. obodo ndị gbara ya gburugburu na mpaghara obodo Prague. ”
Jiří Pos laghachiri Ọdụ ụgbọ elu Prague mgbe afọ asaa gachara. O sonyeere ụlọ ọrụ ahụ na 2006. Site na 2011 ruo 2014, ọ bụ onye isi oche ọdụ ụgbọ elu Prague nke Board of Directors and CEO. Site na 2014 ruo 2015, ọ bụ onye otu ndị isi oche nke Czech Aeroholding Group. Mgbe ọ hapụsịrị otu ahụ, ọ gbasoro ọrụ azụmahịa nke ya, ọkachasị na ngalaba ụgbọ elu na njem. Site na 2019 ruo 2021, ọ rụrụ ọrụ dị ka odeakwụkwọ ọdụ ụgbọ elu Karlovy Vary. Ọ malitere ọrụ ụgbọ elu na ụgbọ elu Czech, ebe ọ nọrọ afọ iri abụọ. Ọ malitere ọrụ ụgbọ elu na 1986, na -arụ ọrụ maka ụgbọ elu Czech, ebe ọ nọrọ afọ iri abụọ. O buru ụzọ rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ mba ofesi Czech na-ebu ndị si mba ọzọ site na 1994 ruo 2001. Mgbe ahụ, ọ bụ osote onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka arụmọrụ ala site na 2003 ruo 2006. Ọ gụchara akwụkwọ na Czech Technical University na Prague, ngalaba nke Mechanical Engineering, na ọkachamara na ngalaba akụ na ụba mmepụta ụgbọ elu.
Ndị isi oche ọdụ ụgbọ elu Prague dị ka nke 30 Ọgọst 2021:
Jiří Pos - Onye isi oche nke ndị isi oche
Jiří Kraus - osote onye isi oche nke ndị isi oche
Jakub Puchalský - Onye otu ndị isi oche
Jiří Černík - Onye otu ndị isi oche